စက္ကန့်ပေါင်းများစွာကြီးစိုးနေခဲ့တာကြာပြီ။ တိတ်တဆိတ် ၀င်ရောက်လာခြင်းများနှင့် တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားခြင်းများ မှာ အခန်းကျဉ်းလေးနှင့် အဲဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲက ကမ္ဘာသည်သာ မှုန်ရီစွာကျန်ရစ်ခဲ့ပေါင်းများပြီ။ သူပြောနေကြ ဘာသာဗေဒ နှင့် အခန်းကျဉ်းလေး၏ဘာသာဗေဒတို့ ထပ်တူညီခဲ့သည်လည်းရှိသလို မတူညီသည့်အခါများတွင် ခြောက်ကပ်ပျင်းရိစွာ ဖြတ်သန်းသွားနေသော စက္ကန့်ပေါင်းများစွာသာ ခိုဖွဲ့အိမ်သီနေခဲ့
သစ်သီးတစ်လုံး၏် ရာဇ၀င်တွင် ရင့်မှည့်လွန်၍ကြွေသက်သွားခဲ့ရလျှင်မကောင်းတတ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်၏ တိတ်ဆိတ်မှုကြောင့် ရင့်လွန် မှည့်လွန်
စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း တွင် ဆွတ်ယူမည့်သူ၏ လက်အတွင်းသို့ ခုန်ဆင်းချင်နေသည့် ၀င်းမှည့်နေသော သစ်သီးတစ်လုံး ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်
နှင်းမြူတို့ အစုမကွဲခင်ကပင် ကျွန်တော်အစောကြီးနိုးနေခဲ့ပါသည်။ ဆောင်းမနက်ခင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်စောစော နိုးထဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိပါသည်။ ခက်တာကကျွန်တော်နိုးသည့် အချိန်တိုင်းနှင်းမြူတို့ လွင့်ပါးကုန်သည့်အချိန်သာများပါသည်။
သည်နေ့တော့ ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်နိုးသည့် အချိန်မှာပင် ဆောင်းနှင်းမြူတို့ ဝေ့သီနေဆဲ ဆောင်းနေခြည်နွေးပင် မဖြန့်ကျက်သေးပါ။
မျက်နှာသစ်ရေမိုးချိုးလို့ အမေ ပြင်ဆင်ပေးသည့်နံနက်စာကို စားပြီးလွယ်အိတ်လွယ်လျက် ကျောင်းကားဂိတ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါသည်။
ဆောင်းနှင်းမြူအောက်လမ်းလျှောက်ရသည်မှာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အရသာ တွေ့လှပါသည်။ ဆောင်းလေနုနုအေးမြလို့ နှင်းပွင့်နှင်းမှုန်တို့ လွင့်မြောနေကြသည့် ဆောင်းမနက်ခင်း ကို ကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးပါသည်။
ကျွန်တော်ကျောင်းကား ဂိတ်ကိုရောက်တော့ ကျောင်းကားများပင်မရောက်သေးပါ။ ကျောင်းကား နေရာရဖိ်ု့(သို့) ကျွန်တော့်လို
ဆောင်းမနက်ခင်းကိုချစ်သည့်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတစ်ချို့တစ်လေသာ ကျောင်းကားဂိတ်မှာ စောစောရောက်နှင့်နေကြပါသည်။
စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ကိုင်လို့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ရယ်မောကာ စကားပြောနေသည့် ကျွန်တော့်ရဲ့ မျက်နက်ဝန်းလေးသည်လည်း ကျောင်းကားနေရာရရန်စောစီးစွာ ရောက်နှင့်နေပါသည်။ သူမသည် ကျွန်တော့် ကိုတွေ့ တော့ ပြုံးပြလို့နှုတ်ဆက်ပါသည်။ ချစ်သူ၏ အပြုံးသည် ဆောင်းမနက်ခင်းနှင့်အတူ လှပစွာ ကျက်သရေရှိလို့နေပါသည်။
သူမ ရယ်လိုက်တိုင်း ၀င့်ဝဲလွင့်ကျသွားသည့် ပါးပြင်ထက်က သနပ်ခါးပွင့်ကလေးများသည်ဆောင်းနှင်းပွင့်တို့နှင့်အပြိုင် ကျွန်တော့် မနက်ခင်းအား လှပနေစေပါတော့သည်။
ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရှိထားသော ခရမ်းရင့်ပြာအကြောင်းကို ကျွန်တော်နှင့်အခန်းကျဉ်းလေးတို့ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့် စက္ကန့်များသည် ကျွန်တော်တို့ ဘေးတွင်ဝိုင်းအုံကာ ခရမ်းရင့်ပြာဒဿနကို စိတ်လိုလက်ရနားထောင်နေခဲ့ကြသည်။
အခန်းကျဉ်းလေး၏ စကားသံသာအကျယ်လောင်ဆုံးကြားနေရသည်။ ခရမ်းရင့်ပြာဒဿနကို သူ့ခံယူချက်အတိုင်းဖွင့်ဆိုနေသော သူ့ဘာသာဗေဒအပေါ်ယုံကြည်မှုခိုင်မာသော အခန်းကျဉ်းလေး၏ စကားသံများကြောင့် စက္ကန့်များသည် ထက်သန်
တိတ်ဆိတ်ခြင်းကတော့ စစ်တုရင်ကစားပွဲများအားလိုက်လံကြည့်ရှုရန်ထွက်ခွာသွားသည်။ မှုန်ရီခြင်းသည်လည်း လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက တည်ရှိခဲ့သော အဖြူရောင်ပိတ်ကားများပေါ်တွင်ခိုဝင်ခြောက်လှန့်ရန်ကြိုးစားလို့…
ကျွန်တော့်ကောင်းကင်သည်လည်း လင်းပျ ခမ်းနားစွာနှင့်…
ကျောင်းကားဖြတ်သန်းသွားရာ ဘေးရာဝန်းကျင်မှ မြင်ကွင်းတွေသည် မပြောင်းမလဲတည်ရှိနေပါသည်။ ကမ္ဘာမြေကို လွင့်စင်ထိခတ်နေကြသည့် နေခြည်အမြင်တန်း များနှင့် မိုးကောင်းကင် ပြာလွင်လွင်သည်လည်း မနေ့ကအတိုင်းသာနွေးထွေးလှပနေပါသည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတို့၏ စကားသံများ၊ ကားလှုပ်တိုင်း တကြွီကြွီိ
မြည်နေသည့် ဆီချောင်နေသော ခုံများ နှင့် ကျွန်တော်တို့ ၏ကျောင်းကားကြီးသည်လည်း လမ်းဟောင်းအတိုင်းသာ လိုရာခရီးသို့ သွားလို့နေပါသည်။
သူမ၏ မျက်နက်ဝန်းလေးများကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနေခဲ့သော ကျွန်တော်နှင့် ခံစားချက်အသစ်တစ်ခုအား ထူးဆန်းစွာရရှိထားသော ကျွန်တော်၏ နှလုံးသားသည်သာ အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလို့နေပါသည်။
“ဘာကြည့်နေတာလဲ” လို့အပြုံးနှင့်မေးလာခဲ့သည် သူမကို “မျက်တောင်မွှေးဘယ်နှပင်ရှိလဲ ရေကြည့်နေတာ”ဟု ရင်ခုန်သံအသစ်နှင့် ကျွန်တော်အဖြေပေးခဲ့ပါသည်။
ရိုးသားစွာဝန်ခံရလျှင် ကျွန်တော်သူမ ကို မြတ်နိုးစွာ ရင်ခုန်နေမိပါသည်။ သူမကို နက်ရှိုင်းစွာ ချစ်မြတ်နိုးဖို့ ကြိုးစားနေသည့် ကျွန်တော့်နှလုံးသားကိုလည်း ကျွန်တော်လျစ်လျူရှုထားလိုက်ရပါသည်။
၀တ်မှုံရနံ့များ ပြည့်သိပ်တင်ဆောင်လာသောလေညှင်းရထားတိုးဝှေ့ ဖြတ်သန်းသွားရာ ကျွန်တော့်လောကတစ်ခွင်လုံး ထုံအီမွှေးပျံ့လို့နေပါတော့သည်။
အခန်းကျဉ်းလေးက ခရမ်းရင့်ပြာအကြောင်းကို ဒဿနတင်မဟုတ် ကဗျာပါရေးလို့ထား
ကဗျာဖတ်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းတွေဝေသွားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သတိရမိနေတယ်
လို့ထင်သည်။ ချက်ခြင်းဆိုသလို သူ့ကဗျာကိုကျွန်တော်အပြီးသတ်ရေးပေးလိုက်သည်။
Posted by ညီအကိုများ at 9:46 PM4comments:
Labels: ကာရန်မဲ့ အတွေးစာစုများ
ကောင်းကင်မှာ လ မရှိ
တစ်ခါ တစ်လေ ဘာရယ်မသိ
Posted by ညီအကိုများ at 12:34 AM4comments:
Posted by ညီအကိုများ at 2:08 AM3comments:
ဒီကဗျာလေးနှင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်ကို ထားခဲ့လို့ ၂၀၁၀ခုနှစ်အား ကြိုဆိုပါသည်။ မင်္ဂလာပါ.
Posted by ညီအကိုများ at 11:48 PM5comments:
၀ရုန်း သုန်းကား ထွက်ပြေးသွားတဲ့
မြေပြင်က အလျင်းသင့်သလို လက်ခံမဲ့
ငါဟာ လေထဲမှာ လွင့်နေခဲ့တာပါ…
မင်းရနံ့ ကိုနမ်းရှိုက်ဖို့ အတွက်
မင်း အပြုံးချိုမြ လေးများ ကမ်းလင့်လှည့်ပါ..
အဲဒီ အပြုံး နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို တွဲခိုလို့
ငါ.. မင်းရဲ့ အနား ခစားချင်လှည့်ပါ့…
Posted by ညီအကိုများ at 6:18 PM3comments:
ငါ့အခန်း နံရံတွေကို ကုတ်ခြစ်…
ဇင်ယော်တွေကတော့ ပျံဆဲ ပျော်ဆဲ..
နှလုံးသားတစ်ခု အတွက် မျက်ရည်တွေကကော
အချစ်ရဲ့ပြယုဂ်လား.. အမုန်းရဲ့ တေးသွားလား
လောကဟာ မာယာတော့ အများသားရယ်။
စုတ်ချက်ရာ ဗရဗွနဲ့ ကင်းဘတ်(စ)
သူ့ရဲ့ ခံယူချက်မှာ ပန်းချီဟာ ဂီတ
Posted by ညီအကိုများ at 8:05 PM2comments:
Posted by ညီအကိုများ at 11:14 AM No comments:
Posted by ညီအကိုများ at 11:13 AM No comments:
Posted by ညီအကိုများ at 9:01 PM 1 comment:
Posted by ညီအကိုများ at 4:13 PM No comments:
ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာလေးတွေကို ပြသထားတဲ့ ပြခန်းလေးတစ်ခုပါ။
ကာရန်မဲ့ အတွေးစာစုများ (20)
ကိုနေ, မိုးကြယ်, သုစံ
ﮝ© я € ∂ ḿ
Green Bean And Asparagus Tempura Recipe - [image: tempura] *green bean and asparagus tempura recipe*. Our site gives you recommendations for downloading video that fits your interests. You can a...
မျက်ဝန်းတစ္ဆေ - မျက်ဝန်းတစ္ဆေhttp://eaindrar.blogspot.com
ChRIs FeHan - ....ဒီငနဲတွေက ခပ်ဆန်းဆန်းပဲ... အားလုံးမျက်နှာဖုံးတွေ ၀တ်ထားကြတယ်... ဒီကောင်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေ...ကျနော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန် တွေဆို...